Thu, Jul 2, 2020 at 11:26am
काठमाडौँ, ३ असार । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको अवरोधका कारण स्थगन भएको विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताले आआफ्नै तर्क गरेका छन् । बैठकको प्रारम्भमै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिन समय दिनुभएको थियो । काङ्ग्रेसले भने सभामुखलाई बिहानै आफ्ना नेताले बोल्नुहुन्छ भनेर समय माग गरे पनि पहिला बोल्न समय नपाएको..
काठमाडौँ, ३ असार सरकारले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा धान्नै नसक्ने गरी स्थानीयबाट मुआब्जाको माग भएपछि त्यस क्षेत्रको बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन आरुघाटक्षेत्रको बस्ती हटाएर नयाँ स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सन्दर्भमा प्रतिआना रु..
संसदमा बोल्न नपाएका प्रधानमन्त्रीले डाके पत्रकार सम्मेलन, गुठी विधेयकबारे भनाइ सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौँ, ३ असार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण युरोप भ्रमण र गुठी विधेयकलगायत समसामयिक विषयमा संसद्लाई जानकारी गराउन नपाएकामा आफू दुःखी भएको जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगनपछि ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, “समसायिक विषयहरूमा रहेको जनचासोका सन्दर्भमा सम्मानित सदनलाई आज जानकारी गराउन पाइन । यस घटनाबाट म दुःखी भएको छु ।” प्रतिनिसभाको आजको बैठक..
प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा पुगेपछि कांग्रेस सांसदको नाराबाजी, बैठक स्थगित
काठमाडौं, ३ असार । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार सम्मलाई स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नारााबजी गरेर अवरोध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक स्थगित गरेका छन् । बैठक सुरु हुनेवित्तिकै कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बोल्न समय दिएपछि सांसदहरुले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्न थालेका थिए । पटक पटकको आग्रहपछि पनि नाराबाजी नरोकिएपछि..
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै, गुठी विधेयकको समस्या सल्टिएला ?
काठमाडौँ, ३ असार । गुठी विधेयकलाई लिएर आन्दोलन चर्केपछि त्यसलाई साम्य पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको संसद सचिवालय श्रोतले बताएको छ । चर्केको गुठी आन्दोलनका विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालसहित काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरुसँग दिनभर विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा गुठी विधेयकबारे मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय लिने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्न लागेका..
इतिहासकै ठूलो पार्टीको भूमिका सरकार सञ्चालनमा शून्य, यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको परिधि
काठमाडौँ, ३ असार । इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ । पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ । अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन ।..
काठमाडौँका मेयर शाक्य गुठी विधेयककै पक्षमा, नेकपाकै अन्य जनप्रतिनिधिले गरे ठाडै अस्वीकार
काठमाडौं, ३ असार । ‘गुठी विधेयकमा विवाद किन ? र के गर्दा उचित हुन्छ’ भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरूलाई बालुवाटार बोलाए । प्रधानमन्त्रीको निम्तोपछि सत्तारुढ दलका जनप्रतिनिधि लाइन लागेर बालुवाटार पुगे । सबैभन्दा पहिला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले धारणा राखे । शाक्यले विधेयकलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि संशोधन..
लोकसेवाको तयारी गर्नेलाई फेरि अर्को तनाब
काठमाडौँ, ३ असार । लोकसेवा आयोगको सर्भरमा समस्या देखिँदा स्थानीय तहका लागि आवेदन दिने आवेदक मर्कामा परेका छन्। स्थानीय तहका लागि आवेदन भर्ने म्याद सकिन केही दिन बाँकी रहँदा आयोगको अनलाइन आवेदन पोर्टलमा समस्या देखिएको छ। अनलाइन फर्म भर्न आयोगले तोकेको वेबपेज (पिएससी अनलाइन डट पिएससी डट जिओभि डट एनपी)मा तीनदिनदेखि प्रयास गर्दा पनि लगइन हुन नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ। आयोगको..
सार्वजनिक यातायातमा वर्षौँदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न सरकारको यस्तो तयारी
काठमाडौँ, ३ असार । सरकारले सार्वजनिक यातायात समितिहरूका रोक्का चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने सम्पत्ति फुकुवा गरेर सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वर्षौँदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट संस्थागत गर्न खोजेको देखिएको छ। यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बैंकमा रोक्का रहेको यातायातको चलअचल सम्पत्ति फुकुवा गर्न परिपत्र जारी गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ । कम्पनी रूपान्तरणका लागि यातायात व्यवस्था..
रोकिएन प्रहरी अनुसन्धानमा जालझेल, ज्यान लिने चालकलाई उम्काउन नक्कलीलाई मुद्दा
काठमाडौँ, ३ असार । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा नक्कली अभियुक्त खडा गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रहरी विवादमा फस्यो । सोही कारण केही प्रहरीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा नै दायर भयो । तर, त्यो घटनापछि पनि प्रहरी अनुसन्धानमा जालझेल रोकिएको छैन । सवारी दुर्घटनामा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेर वास्तविक दोषीलाई जोगाउँदै आएको खुलेको छ । सवारी ज्यान मुद्दामै जालझेल गरेको..
घर पाउने सूचीबाट बाराका ५५६ हुरीपीडितको नाम गायब, फरक राजनीतिक आस्था राख्नेलाई छानीछानी अन्याय
काठमाडौँ, ३ असार । गत १७ चैतको हावाहुरीमा सबैभन्दा प्रभावित फेटा गाउँपालिका–१ भरवलियालगायत विभिन्न गाउँका पाँच सय ५६ पीडितको नाम घर पाउने सूचीबाटै हटाइएको छ । सेनाले तथ्यांक संकलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका एक हजार चार सय दुई घरको तथ्यांक निकाले पनि अहिले आठ सय ४६ घरको सूचीअनुसार निर्माण गरिरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादले वास्तविक पीडितलाई घर पूर्ण क्षति भएको..
Results 9709: You are at page 139 of 324